Torohevitra hividianana milina fanapahana laser / sokitra
Dingana 1: Ny olana voalohany dia ny fanohanana. Betsaka ny fanafarana mora vidy, avy any Shina ny ankamaroany eny an-tsena. Saingy masera sarotra ny laser ary vaky tokoa izy ireo ary mila amboarina. Hamarino tsara fa azo antoka ny orinasa ividiananao ary manolotra fanampiana tsara ho anao sy ny masinin'izy ireo aorian'ny fividiananao azy ....
Fisafidianana ny milina fanoratana tamin'ny laser
Taona maro lasa izay, ny milina fanaovana sokitra tamin'ny laser dia tsy afaka manao sary sokitra kely fotsiny noho ny fetra ara-teknika. Miaraka amin'ny fanavaozana tsy tapaka sy ny fivoaran'ny teknolojia, ny motherboard fanaraha-maso novokarina ankehitriny dia afaka manohana tsara sokitra endrika lehibe. Vokatr'izany, ny sokitra laser fanamafisam-peo ambany / ...
Fampiharana ny milina fanapahana sokitra tamin'ny laser
Mpanamboatra milina fanoratana laser. Ny milina fanoratana amin'ny laser dia vokatra teknolojia avo lenta, izay vokatra optika, mekanika, elektrika. Miaraka amin'ny fampandrosoana mahomby amin'ny teknolojia sokitra laser, nanomboka nivoatra haingana ny indostria. Hatramin'izao, ny fampiharana o ...